Isifundo: Yenza, wenze ngokuzenzekelayo kwaye ugcine iintshukumo kwiFotohop | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Kule tutorial siza kubona ngendlela elula uyenza njani, uyenze ngokuzenzekelayo kwaye ugcine imisebenzi kwisicelo sethu seFotohop. Ukwenza iintshukumo kunokuba luncedo ngakumbi ngakumbi xa sisebenza nenani elikhulu leeprojekthi ngaxeshanye kwaye kufuneka sisebenzise ifomathi efanayo, isiphumo okanye uhlengahlengiso kunye.
Ukuza kuthi ga ngoku sibonile iintshukumo ezincitshisiweyo ekudalweni kweziphumo zefoto, umbala, umahluko, imontage ... kodwa esi sixhobo seFotohop isebenza ngaphezulu kakhulu ukulungiselela oku, kusebenza ukugcina zonke iintlobo zeenkqubo kunye nohlengahlengiso olunokuthi lube nefoto kwi-Photoshop. Kule meko siza kubona indlela yokwenza isenzo ukuphembelela imo yokugcina okanye ukuguqula ifomathi yeefoto zethu. Into esiza kuyenza kukulandela inkqubo yokugcina imifanekiso yethu kwifomathi ye-TIFF, eya kuba luncedo kakhulu ekusebenzeni kwifayile ye- ukuguqulwa kwefayile.
Yenza iintshukumo: Isenzo esinye kukusetyenziswa kweziphumo kunye nokukhethwa kwiFotohop ngendlela eqokelelweyo ngokuzenzekelayo kwaye ngonqakrazo olunye. Ukusebenza kwisenzo kufuneka sisebenze kuzo zonke izinto zayo. Kumzekelo kolu qeqesho, izinto ezibalulekileyo okanye amanyathelo aya kuba yinkqubo yokugcina. Nangona kunjalo, ukuba into esiyifunayo kukwenza isenzo esineempawu ezizodwa okanye ezinemibala, kufuneka sisebenze nganye nganye ngaxeshanye nesicelo sirekhoda yonke intshukumo yethu (singakujonga oku ngokubona iqhosha lethu leRec okanye lokurekhoda kwi bomvu).
Siza kungenisa ifoto apho siza kusebenza khona kwaye siza kuyivula ngokunqakraza kabini kwi-icon yokutshixa.
Siza kuya kwiWindows> Imenyu yentshukumo kwaye iintshukumo ezivelayo ziya kuvela kunye noseto lwazo (sinokufikelela kule festile ngokucinezela i-Alt + F9). Uya kubona ukuba kuloo festile iphumayo kukho uluhlu okanye itafile yeziphumo. Ezi zinokusetyenziswa kwaye ziza ngokungagqibekanga nesicelo sethu, kodwa kule meko siya kusebenza ekudaleni iziphumo zethu.
Siza kucofa kwiqhosha kwikona ephezulu ngasekunene kwaye ukhethe ukhetho «Yenza iqela». Ngale ndlela yonke inkqubo iya kuba nocwangco ngakumbi kwaye umzuzu esifuna ukuwufumana umphumo esiwuphuhlisileyo kunye nazo zonke izinto onokukhetha kuzo kunye nezinto ziya kubonakala ngokulula. Xa ucofa eli qhosha, iwindow pop-up iya kuvela apho kufuneka sinike iqela lethu igama.
Ukugcina ifolda entsha okanye iqela lenziwe kwipaneli yesenzo, siya kubuyela kwiqhosha kwikona ephezulu ngasekunene kwaye ukhethe ukhetho «Intshukumo entsha». Kule meko siza kubiza "iFomathi yeTIFF" kwisenzo sethu esitsha.
Okwangoku xa sijonga isenzo sethu, iqhosha le-rec liya kubomvu, oku kuthetha ukuba i-Adobe Photoshop iya kurekhoda yonke inkqubo yokwenza isenzo sethu.
Emva koko siya kugcina uxwebhu lwethu kwifomathi ye-TIFF ngokulandela onke amanyathelo ukuze agcinwe ngokufanelekileyo kwimbali yezenzo zethu. Siza kuya kwiFayile> Gcina njenge ... kwaye ukhethe ifomathi ye-TIFF. Siza kucofa ukwamkela.
Ngokukhawuleza siya kwiqhosha le-STOP ukuyeka ukurekhoda okanye kwiqhosha eliphezulu lasekunene lenjongo yesenzo kwaye ucofe ku «Misa ukurekhoda».
Ukuba sijonga kwiphaneli yamanyathelo siza kubona ukuba ngoku ngaphakathi kwifolda okanye kwiqela esele senze isenzo "iFomathi yeTIFF" iya kubonakala iqulethwe kunye nedatha yesenzo esichaziweyo phantsi kwayo.
Ukuzenzekelayo kwezenzo: Njengoko igama layo libonisa, le nkqubo iya kusinceda sisebenzise ngokungakhethi isenzo sethu kwisixa esingenamda kumaxwebhu okanye kwiifomathi ze-.psd.
Ukufaka amanyathelo ethu ngokuzenzekelayo kwinani elingenamkhawulo lamaxwebhu okanye iiprojekthi kuya kufuneka siye kwimenyu yeFayile> Ukuzenzekelayo> iBatch ...
Kule festile siza kubona ukhetho olucwangcisiweyo apho kufuneka sikhethe khona ifolda equlethe isenzo sethu kwaye kwisenzo siza kubonisa ithebhu ukukhetha isenzo esifuna ukuyigcina. Siza kukhetha isenzo »Ifomathi yeTIFF».
Kukhetho lwe- "Imvelaphi", siza kwenza ukhetho kwifolda kwaye ucofe kwiqhosha elithi "Khetha ...". Iwindow yokukhangela iya kuvela kwaye siya kujonga kwifolda equlathe yonke imifanekiso esifuna ukufaka kuyo isenzo. .
Siza kucofa ku Yamkela kwaye zonke iifoto okanye imifanekiso eya kuthi ifowulda ekhethiweyo iqulethwe kwisicelo sethu iya kuvela ngokuzenzekelayo. Ukongeza, baya kugcinwa kwifomathi ye-TIFF ngokuzenzekelayo kwifolda yomthombo.
Ukugcina kunye nokugcina iintshukumo: Eli nyathelo liya kusinceda sabelane ngezenzo zethu kwaye sizisebenzise ngendlela yokuba sizisebenzise kwezinye iiprojekthi, kwezinye iikhompyuter okanye sabelane ngazo kwinethiwekhi njengesixhobo.
Ukugcina isenzo sethu kwikhompyuter yethu, kuya kufuneka siye kwiqhosha eliphezulu lasekunene lePhaneli yeZenzo kwaye ukhethe ukhetho "Gcina iintshukumo", iwindow pop-up iya kuvela ngokuzenzekelayo kwaye sikhethe indawo ekuyiwa kuyo.
Siza kukhetha igama lezenzo zethu kwaye liya kugcinwa ngokuzenzekelayo ngolwandiso .atn.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » Izixhobo zoYilo » Photoshop » Isifundo: Yenza, Zenzekelayo, kwaye ugcine iZenzo kwiFotohop
Enkosi Fran !!